Manazava antsika ny fanahy
Dia hoy Jesosy taminy: Mbola kely ihany no hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ ny maizina dia tsy mahalala izay alehany.Jaona 12:35
Hoy i Jesôsy: "Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo". Angony ireo tara-pahazavana rehetra, ary aza misy avela na iray aza. Mandehana amin'ny mazava. Ampiharo ireo fitsipi-pahamarinana rehetra naseho anao. Aoka ianao hiaina araka ny teny rehetra navoakan'ny vavan'Andriamanitra, ary aorian'izay dia hanaraka an'i Jesôsy ianao, na aiza na aiza halehany. Rehefa maneho porofo miampy porofo sy fahazavana miampy fahazavana, nahoana no misalasala ny handeha amin'ny fahazavana ny fanahy? Nahoana no ataon'ny olona tsirambina ny fandehanana avy amin'ny fahazavana ho amin'ny fahazavana lehibe kokoa?
Tsy lavin'i Jesôsy ny hanome ny Fanahiny Masina ho an'ireo izay mangataka Aminy. Rehefa tonga ao amin'ny feon'ny fieritreretana ny faharesen-dahatra, nahoana no tsy henoina izy, ary raisina ny feon'ny Fanahin'Andriamanitra? Mametraka ny tenantsika eo amin'ny toerana, izay mihasarotra kokoa hatrany ny hanekentsika ny fahazavan'ny lanitra isika, isaky ny fotoana isalasalantsika sy fahatarantsika, ary amin'ny farany dia toa sarotra tanterahina ny ho voasarika amin' ny alalan'ny fananarana sy ny fampitandremana. Mora foana ho an'ny mpanota ny milaza hoe: "Mandehana angaloha; fa raha malalaka, dia hampaka anao indray aho" - Asa. 24:25.
Fantatro ny zava-doza miandry ireo izay mandà ny tsy handeha eo amin'ny fahazavana, araka ny nanomezan'Andriamanitra izany. Mametraka ny tenany ho eo amin'ny fotoan-tsarotra mahatsiravina izy, amin'ny famelana ny tenany hanaraka ny lalany manokana, ary hanao zavatra araka ny fitsarany manokana. Lasa tsy mety tarihina tsikelikely ny feon'ny fieritreretana. Lasa mihamanalavitra bebe kokoa hatrany ny feon'Andriamanitra, ary tavela eo amin'ny fankasitrahana ny tenany ireo mpanao ratsy. Manohitra amim-pahamafisandoha ireo antso rehetra atao aminy izy, mankahala ireo torohevitra sy soso-kevitra, ary miala amin'ireo fanampian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena azy, ary tsy misy fiantraikany amin'ny sainy ny tenin'ilay mpitondra ny hafatr' Andriamanitra. Tsy mampiasa hery eo aminy, izay misintona azy hiala, intsony ny Fanahin'Andriamanitra, ary dify ny didim-pitsarana. "Tafaraikitra amin'ny sampy Efraima; aoka izy ho eo"- Hôs. 4:17.Tahaka ny ahoana ny fahamaizinana, manjonitra, ny fikirizany hanana fahaleovan-tena! Toa efa ao ampony ny fahazoana ny fahafatesana. Izany no lalana hizoran'ny fanahy izay mandà ny asan'ny Fanahy Masina.- RH, 29 Jona 1897.